Jonga ukuhlawulwa kweApple ngeApple yokuHlawula kamva | IPhone iindaba
Jonga ukuhlawulwa kweApple ngeApple yokuHlawula kamva
Inkampani yaseCupertino isebenza kwinkonzo entsha abayibizileyo I-Apple Pay kamva kwaye ekujongwe ukuba iintlawulo ezenziwe ngeApple Pay zingamiswa. Ngokomgaqo, le nkonzo intsha enokuthi ifike kuphela e-United States iya kuba izimele ngokupheleleyo kwinto eyenzayo ngoku nge-Apple Card.
Kule meko, ngumcimbi wokuhlawulela ukuthenga usebenzisa i-Apple Pay njengoko bekusoloko kusenziwa kwaye emva koko uzibekisa. Okwangoku akukho datha ininzi malunga nokuba le nkonzo izakusebenza njani kwaye ukuba ngaba naluphi na uhlobo lomdla luyakufakwa kurhoxiso lweentlawulo, into ecacileyo yeyokuba iya kuba yenye indlela yokuxhasa ngemali abasebenzisi beApple kwayeOku kuya kuvela kwisandla sikaGoldman Sachs.
I-Apple Pay kamva ifuna ukwenza iApple Pay intlawulo ibe lula
Into emalunga nokwandisa iinkonzo kwaye kule meko kuya kubakho ukongeza uhlobo lwekhredithi eyongezelelweyo kubasebenzisi beApple Pay ngenkonzo yokuhlawula okwethutyana. Kwelinye icala ukuphunyezwa kwenkonzo ngalo mzuzu akungaziwa kwaye njengoko sisitsho, kunjalo Ngokukodwa kubasebenzisi abahlala eUnited States, kwaye kubonakala kunzima ukwandisa olu hlobo lweenkonzo kwamanye amazwe ngefilosofi eyahlukileyo yebhanki.
Inyani yile yokuba apha kwilizwe lethu nakwamanye amaninzi asikabinakho ukuhlawula phakathi kwabasebenzisi be-Apple ababizwa, iApple Cash okanye iApple Card, ke ukulinda le nkonzo ukuba ifike kunokuba yintlungu ecothayo. Okwangoku yiprojekthi enokuthi isungulwe eUnited States, emva koko siza kubona ukuba iyaphela isasazeka kumazwe amaninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Pay » Jonga ukuhlawulwa kweApple ngeApple yokuHlawula kamva
I-iPhone SE 3 inokufika kwisiqingatha sokuqala se-2022
I-Apple TV + iphumelele ii-Emmys ezintathu zomxholo wasemini